BBC Reith: Mabda'a cusub ee ay daabacday warbaahinta oo uu dhiirigaliyay aasaasihii | Abuurista khadka tooska ah
BBC waa mid warbaahinta caalamiga ah ee ugu muhiimsan maanta iyo sidoo kale waxay u adeegtaa xarun neerfaha wax kasta oo ku lug leh tafatirka, daabacaadda iyo qaabeynta. Waa warbaahin xarrago leh oo leh xirfadlayaal ugu wanaagsan darajooyinkeeda, sidaas darteed mar kasta oo ay la yimaadaan wax cusub oo ay ku daraan safkooda, waxay inta badan soo jiidataa fiiro gaar ah.
Markan waxay ahayd markiisii ​​qaab-qoristiisa cusub ee ay fulisay Dalton maag. Noocani waa in loo qaabeeyaa si uu ugu dhex daro ilaa 100 luqadood oo kala duwan laga bilaabo maalinta koowaad, sidaa darteed shaqada ay qabatay daraasaddan waa mid aad loogu ammaano.
BBC doonayay font qof kasta oo awood u leh inuu cod bixiyo dhaxalkiisa qoraal ahaan. Marka la gaaro dhagaystayaal kala duwan oo adduunka oo dhan ah, hadafku wuxuu ahaa mid loo adeegsado dhammaan noocyada muujinta iyo sidoo kale waxqabadka sare ee isla qaabeynta.
Laga soo bilaabo Creative Bloq waxay la wadaagtay gudaha gudaha horumarka hal abuurka ka soo xigtay ilahaan cusub ee BBC. Ka dib markii "indho sarcaad" lagu sameeyay xarfaha kala geddisan sida Helvetica, oo leh muuqaal weyn oo muuqaal ah inkasta oo aan weli la magacaabin, fikraddu waxay ahayd nooc qoraal ah oo muujinaya, oo ku habboon suuqa tartanku sii kordhayo isla markaana sii wadaya dhaqankii BBC-da.
Reith ayaa loo doortay magaca farta uu dhiirrigeliyey John Charles Walsham Reith, oo aasaasay BBC-da sanadkii 1922. Fikradiisuna waxay ahayd marwalba in la sameeyo wargeys wax lagu baro dadka badan. Marka magacaabista isha qaabkan waxay ahayd fikrad aad u fiican oo ka timid kooxda daraasaddan.
Sawirka kore wuxuu ina tusayaa xal dhameystiran oo lagu tijaabiyay culeysyo kala duwan laga bilaabo khafiifka ilaa geesinimada dheeriga ah, oo leh iyo iyada oo aan lahayn serifs. BBC Reith waa isha aad ka heli karto halkan si aad uga hesho dhinacyadeeda kala duwan una aragto shaqada waxaa fuliyay Maag.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Font-ka cusub ee BBC-da
Dhammee silsiladda ugu fiican ee hadiyad hal-abuur u ah Kirismaskan